Chii chinonzi Enterprise Tag Management? Nei Uchifanira Kuteedzera Tag Management? | Martech Zone
Verbiage inoshandiswa nevanhu muindasitiri inogona kuvhiringidza. Kana iwe uri kutaura nezvekumaka ne blogging, iwe ungangodaro unoreva kusarudza mazwi akakosha kuchinyorwa ku Tag iyo uye ita kuti zvive nyore kutsvaga nekuwana. Tag manejimendi tekinoroji yakasiyana zvachose uye mhinduro. Semaonero angu, ndinofunga rakatumidzwa zita zvisirizvo… asi rava izwi rakajairika muindasitiri yese saka tichaitsanangura!
Chii chinonzi Tag Management?
Tagging saiti iri kuwedzera mamwe ma tag mumusoro, muviri, kana tsoka dzesaiti. Kana iwe uchimhanyisa akawanda analytics mapuratifomu, kuyedza masevhisi, kutendeuka kuteedzera, kana kunyangwe imwe inesimba kana yakanangwa masisitimu ezvimukati, zvinoda nguva dzose zvinoda kuti iwe upinze zvinyorwa mune yako zvemukati manejimendi system system matemplate. Tag manejimendi masystem (TMS) anokupa iwe imwe script yekuisa mune yako template uye ipapo unogona kubata vamwe vese kuburikidza nechitatu-bato chikuva. Iyo tag manejimendi system inokutendera iwe kuvaka midziyo uko kwaunogona kuronga zvine hungwaru ma tag aunoda kubata.
In imwe Enterprise sangano, tag tag inogonesa timu yekushambadzira, webhu dhizaini timu, zvemukati zvikwata uye IT zvikwata kuti zvishande zvakasununguka kune mumwe nemumwe. Nekuda kweizvozvo, timu yedhijitari yekushambadzira inogona kuendesa nekugadzirisa ma tag pasina kukanganisa zvirimo kana dhizaini zvikwata… kana kuita zvikumbiro kuzvikwata zveIT. Pamusoro pezvo, mabhizinesi ekumaka tag mapuratifomu anopa kuongororwa, kuwana, uye mvumo inodiwa kukurumidza kutumirwa uye kuderedza njodzi ku nepakumedura saiti kana kunyorera.
Ive neshuwa yekuverenga yedu posvo pakutumira ecommerce tag manejimendi, ine runyorwa rwe zana akakosha ma tag ekuisa uye kuyera kushamwaridzana kwevatengi uye maitiro ekutenga.
Nei Bhizinesi Rako Rinofanirwa Kushandisa A Tag Management Sisitimu?
Pane zvikonzero zvinoverengeka nei ungangoda kuisa iyo tag manejimendi system mukuita kwako.
In imwe bhizinesi nharaunda uko protocol, kutevedza, uye chengetedzo zvinodzivirira vashambadziri kubva pakuisa zvinyorwa nyore muCMS yavo. Zvikumbiro zvekuwedzera, kugadzirisa, kugadzirisa kana kubvisa saiti script ma tag zvinogona kunonoka kugona kwako kugadzirisa ako kushambadzira kuyedza. A tag manejimendi sisitimu inogadzirisa izvi nekuti iwe unongoda kuisa imwechete tag kubva kune yako tag manejimendi system uye wozo maneja ese mamwe kubva kune iyo system. Iwe haufanire kuita chimwe chikumbiro kune yako timu yezvivakwa!
Tag manejimendi masisitimu anofambiswa mhiri zvemukati zvekutumira network izvo zvinokurumidza zvinoshamisa. Nekuita chikumbiro chimwe chete kusevhisi yavo uyezve wozoteedzera zvinyorwa mukati mewebsite yako, unogona kudzikisa nguva dzekuremedza uye kubvisa mukana wekuti saiti yako ichafefetera kana sevhisi isiri kumhanya kuzasi. Izvi zvinowedzera ese maviri kutendeuka mitengo uye kubatsira yako yekutsvaga injini optimization.
Tag manejimendi masystem anopa mukana ku dzivisa kuteedzera kwakapetwa, zvichikonzera kuyerwa kwakaringana kwezvose zvako zvivakwa.
Tag manejimendi masisitimu anowanzo kupa nongedza wobva wadzvanya kusangana nemhinduro dzese dzauri kuisa pawebhusaiti yako. Hapana kudikanwa kwematani emakopi uye kunamatira, ingo pinda mukati uye gonesa mhinduro imwe neimwe!
Mazhinji tag manejimendi masisitimu akachinja uye anopa mhinduro dzakasimba dze kupatsanura kuyedzwa, kuyedzwa kweA / B, kuyedza kwakawanda. Unoda kuyedza musoro mutsva kana mufananidzo pane yako saiti kuti uone kana ichiwedzera kubatanidzwa kana kudzvanya-kuburikidza nemitengo? Enda kumberi!
Mamwe ma tag manejimendi masisitimu anotopa zvine simba kana zvakanangwa zvirimo kuendesa. Semuenzaniso, iwe ungangoda kushandura ruzivo rwewebsite yako kana mushanyi ari mutengi maringe netarisiro.
10 Makomborero eTag Management
Heano akakurisa muongororo infographic yemusoro gumi mabhenefiti e tag maneja kune vatengesi veadhijitari kubva Nabler.
Enterprise Tag Management Systems (TMS) Mapuratifomu
Inotevera irondedzero ye Enterprise tag manejimendi mhinduro, ive shuwa yekutarisa mavhidhiyo pane mamwe eaya kuti uwane imwe tsananguro yekugona kwetag manejimendi uye tag manejimendi masystem.
Adobe Experience Platform Kutanga - Kuedza kubata vatengi-padivi deployments yeese matekinoroji mune yako yekushongedza stack inogona kuzadzwa nematambudziko Neraki, Chiitiko chePuratifomu Yekutanga yakavakwa neAPI-yekutanga dhizaini, iyo inobvumidza kunyorera kuti ishandise tekinoroji deployments, kushambadzira kufambiswa kwemabasa, kuunganidzwa kwedata uye kugovana, nezvimwe. Saka mabasa anotora nguva ekare, senge webhu tag manejimendi kana nharembozha SDK kumisikidza, tora nguva shoma - ichikupa yakanyanya kutonga uye otomatiki.
kuona - Manage ako ese evatengesi ma tag uye data kuburikidza neiyo imwe intuitive interface, iine zvinopfuura 1,100 turnkey mutengesi kusangana. Kubatanidza uye kumisikidza zvakapatsanurwa sosi dhata pane matekinoroji nemidziyo kutyaira yakakura ROI kubva kune yako irikushanduka tekinoroji stack kuburikidza neiyo imwe dhata dhata tag maneja.
Google Tag Manager - Google Tag Manager inoita kuti iwe uwedzere kana kugadzirisa ako mawebhu taggi uye nharembozha, nyore uye zvemahara, pese paunoda, pasina kubhaga iyo IT vanhu.
Tealium iQ - Tealium IQ inogonesa masangano kudzora nekugadzirisa yavo data revatengi uye MarTech vatengesi pawebhu, nhare, IoT, nemidziyo yakabatana. Yakagadzirirwa neecosystem yekupfuura 1,300 turnkey mutengesi kubatanidzwa inopihwa kuburikidza nematagi nemaAPIs, unogona nyore kutumira uye kugadzirisa ma tag evatengesi, kuyedza matekinoroji matsva, uye pakupedzisira utore kudzora kwako kushambadzira tekinoroji.
Tags: adobe chiitiko gore rekutangaadobe chiitiko chikuvakuvhura adobeadobe tag manejaensightenbhizinesi tag tagEnterprise tag manejagoogle tag manejatag managementtag manejimendi mapuratifomutag manejimendi systemtealium iqtms